Muriel Harris loka miavaka amin'ny serivisy - Fikambanan'ny Ivotoerana manoratra iraisam-pirenena
Nomena anarana taorian'ny nahazoany azy voalohany ary nomena tamin'ny fihaonambe International Writing Centers Association (IWCA) rehetra, ny Muriel Harris Outstanding Service Award dia nanaiky ny serivisy miavaka izay nanasoa ny vondrom-piarahamonina foibe fanoratana iraisam-pirenena tamin'ny fomba lehibe sy mivelatra.
Ny fanolorana anarana dia tokony halefa ho rakitra PDF tokana misy pejy misy isa, ary tokony hampidirina ireto manaraka ireto:
Taratasy fanolorana anarana iray izay misy ny anarana sy ny andrim-panjakana nomena anao, ny fahalalanao manokana na ny zavatra niainanao tamin'ny fandraisana anjaran'ny mpiasa voatendry ho an'ny vondrom-piarahamonina foibe fanoratana, sy ny anaranao, ny rafi-pitantanana ary ny adiresy mailakao.
Antontan-taratasy fanohanana amin'ny antsipiriany (pejy 5 ambony indrindra). Ireo dia mety misy sombintsombiny amin'ny vita vita amin'ny fandaharam-pianarana, atrikasa na zavatra vita an-tsoratra, tantara na tantara anecdotes, na asa voalohany nataon'ny olom-boatendry.
Taratasy fanohanana hafa (tsy voatery fa 2)
Drafitra fanolorana anarana ho an'ny taona 2020: Ny fanolorana anarana dia ekena hatramin'ny 30 Jona 2020. Mandefasa fanendrena ho an'ny Seza MHOSA, Michele Eodicemeodice@ou.edu).
Vakio ny tantaran'ny MHOSA ao amin'ny Fanoratana Gazety 34.7, pejy 6-7 .
2016: Paula Gillespie ary Brad Hughes